Dayuurad Hub sidda oo maanta ku soo degtey Garoonka Aadam Cadde. [Akhris …] – Radio Daljir
Dayuurad Hub sidda oo maanta ku soo degtey Garoonka Aadam Cadde. [Akhris …]
Muqdisho, June 29- Warar aannu si hoose ku heleyno ayaa waxaa ay shaaca ka qaadayaan in manta magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ay soo gaartey dayuurad nooca Xammuulka qaadda ah taas oo sida la sheegey wadday saanad ciidan.
Garoonka Caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ayaa gebi ahaanba saaka waxaa uu ahaa mid xidhan iyada oo aysan jirin haba yaraate wax rayad ah oo gelayey kana soo baxayey gudaha garoonka waxaana dhammanba ay xireen ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waddooyinka soo gala garoonka.
Sidoo kale wararka aannu heleyno ayaa waxaa ay intaas ku darayaan in dayuuradda ay wadday hubkii dhawaantay dawladda Mareykanka ay sheegtey in ay siineyso dawladda Soomaaliya si ay isaga difaacdo kooxaha ka soo hojeeda oo haatan u muuqda in ay ka awood badanyihiin dawladda KMG.
Ciidamada AMISOM ayaa sidoo kale waxaa ay saaka ka fuliyeen hawl gallo gudaha magaalada Muqdisho qeybo ka tirsan gaar ahaanna waddada KM 4. kaddib markii dagaallo xooggani ay ka dhaceen maalintii shaley waddada KM 4 isla markaana lala beegsadey Hoobiyayaal saldhigyo ay leeyihiin ciidamada Uganda ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho.
Saanadda Milliteri ee manta ka soo degtay garoonka Caalamiga ah ee Muqdisho ayaa waxaa ay tahay gurmad ay xilligan u baahnayd DFKMG inkasta oo dhibaatada hubka ku soo qul qulaya gudaha dalka Soomaaliya laga sii deyriyey maaddama ciidamada dawladda iyo kooxaha Maxkamadaha ka tirsan ee taageera dawladda ay hub fara badan ay u gacan geliyeen kooxaha Mucaaradka ah.
Mareykanka ayaa horey waxaa uu sheegey in illaa iyo 40 Ton oo hub ah ay siineyso dawladda KMG ee Soomaaliya si ay isaga difaacdo kooxaha weerarrada joogtada ah ku soo qaadaya.